प्रभासको ‘साहो’मा ‘बाहुबली भन्दा चार गुणा खतरनाक स्टण्ट, कलेक्सनमा सबैको रेकर्ड तोड्ने योजना ! - Koshi Online
प्रभासको ‘साहो’मा ‘बाहुबली भन्दा चार गुणा खतरनाक स्टण्ट, कलेक्सनमा सबैको रेकर्ड तोड्ने योजना !
विराटनगर, साउन २७, बाहुबलीको अपार सफलतापछि सबैलाई प्रभासको आउँदो फिल्म ‘साहो’ प्रतिक्षा छ ।
यो प्रतिक्षा यसकारण पनि खास छ किनकी बाहुबली २ पछि प्रभासको कुनैपनि फिल्म बक्स अफिसमा रिलिज भएन । यसैबीच फिल्म ‘साहो’लाई लिएर ठूलो र महत्वपूर्ण खबर आएको छ । फिल्म ‘साहो’ले बाहुबली २ को रेकर्डसमेत ब्रेक हुने बताइएको छ ।
खबर अनुसार ‘साहो’ फिल्मको अबु धाबीमा केही सिनहरु शुटिङ भएको छ । एक्सन सीक्वेन्समा कार, बाइक र हेलिकप्टरद्वारा खतरनाक स्टण्ट सीन्स गरिएको छ । फिल्मको तेस्रो शेड्यूलको शुटिङ प्रभास र श्रद्धाका साथ हैदराबादमा भइरहेको छ । यसपछि फिल्मको अन्तिम शुटिङ रोमानियामा हुनेछ ।
‘साहो’ फिल्मको शुटिङका क्रममा धेरै किसिमको तस्वीर भाइरल भइसकेको छ जसमा प्रभास जबरजस्त लुकमा देखिएका छन् । ‘साहो’ मा प्रभास बाहेक श्रद्धा कपुर, नील नितिन मुकेश, जैकी श्राफ र मन्दिरा बेदी छन् । यस फिल्मलाई सुजीतले निर्देशन गर्दैछन् ।
खबरका अनुसार यस फिल्म बाहुबली २ प्रदर्शनमा आएकै दिन रिलिज हुने बताइएको छ । अर्थात् २८ अप्रिलमा आउने भएको छ ।